Noho ilay andro ratsy: hahazo orana betsaka ny any avaratra | NewsMada
Noho ilay andro ratsy: hahazo orana betsaka ny any avaratra
Andro ratsy na “dépression tropicale” roa no indray niforona any amin’ny ranomasimbe Indianina, ny alatsinainy teo, araka ny filazana avy amin’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Omaly maraina, tokony ho tamin’ny 9 ora teo, tany amin’ny 3 660 km, tany avaratra atsinanan’Antsiranana, ny nisy ilay voalohany. Ilay faharoa kosa, tany amin’ny 235 km any avaratra somary avaratra atsinanan’Antsiranana.
Nohamafisin’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro fa, hatramin’ny omaly, mbola “dépression tropicale” ny herin’ireto andro ratsy roa ireto, ka 55 km isan’ora ny rivotra entin’izy ireo tsirairay avy ary arahina tafiotra 75 km isan’ora. Araka ny tombantombana, hikisaka mianandrefana ilay rivodoza voalohany, ao avaratr’Antsiranana, ka manambana ireo Nosy ao avaratry ny Lakandranon’i Mozambika.
Ilay andro ratsy faharoa kosa, hikisaka mianatsimo atsinanana, izany hoe, mihamanatona ny morontsiraka amin’ny tendrony avaratry ny Nosy. Araka ny vinavinan’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, hitombo hery izy ireo ato anatin’ny andro ho avy. Noho izany, mbola hahazo orana betsaka ny tendrony avaratry ny Nosy, anio. Tsy misy kosa ny filazana loza mikasika ny rivodoza eto Madagasikara.